Accueil > Gazetin'ny nosy > Sylvia Andriamaharosoa: Vehivavy Malagasy manam-pahaizana, nahazo diplaoma ambony tany Canada !
Sylvia Andriamaharosoa: Vehivavy Malagasy manam-pahaizana, nahazo diplaoma ambony tany Canada !
«Reharehanay aty Amerika avaratra i Sylvia Andriamaharosoa ! Diboka hafaliana izahay ary mirehareha manana azy ho isan’ny manam-pahaizana amin’ny sehatra tsy mahazatra. Tokony hasandratra ny Malagasy tahaka ireny satria vitsy isika Malagasy no lasa lavitra amin’ny sehatra sarotra tahaka izay nodiaviny. Raha ny statistika no jerena, dia mbola ny lehilahy no manjaka amin’itony taranja itony », hoy Koly Ralambo, Malagasy monina ao New York naneho ny hafaliany tamin’ny nahavitan’i Sylvia Andriamaharosoa ny doctorat-ny. Malagasy ray, malagasy reny ity vehivavy vao nahazo ny diplaoma ambony indrindra Doctorat ès-sciences des technologies de l’informatique (STI) du département de l’ingénierie et de l’informatique ity. Ny 04 novambra teo no nanohanany ny voka-pikarohany tao amin’ny Oniversiten’i Québec ao Outaouais (UQO).
Ireo olona akaiky an’i Sylvia dia miaiky ny fitiavany fianarana. « Hatramin’ny nahalalako azy dia nianatra ny fiainany » hoy ny Malagasy iray izay mahafantatra azy tsara. Efa taona maro izy no niala tao Madagasikara ary nahazo vatsi-pianarana tao amin’ny Ecole Polyteknika tao La Havane (Cuba). Nivoaka Injeniera momba ny taojava-baventy (ingénieure industrielle) izy tamin’izany. Dia mbola tsy afa-po tamin’ny fahaizany ka lasa niditra sekoly polyteknika tao Montréal – École polytechnique de Montréal indray ! Isan’ny sekoly mafy sy malaza ho mahay izany sekoly nidirany izany ka na ny fidirana ao aza dia fifaninanana tsy roa aman-tany. Ny henjana ihany no tafiditra ao. Tsy vitan’izay fa mbola notohizany tao amin’ny sekoly momba ny teknolojia avo lenta – École de technologie supérieure (ETS) ny fianarana nataony.
Na dia teo aza izany fianarana zavo-tany nohalalininy izany dia niasa ihany koa i Sylvia Andriamaharosoa ary tsy asa mora no nankinin’ny lehibeny azy : injeniera tao amin’ny orinasa mikirakira ny fiaramanidina ny tenany : Bombardier Aéronautique nandritra ny 3 taona. Taorian’izay dia mpanolotsaina fototra misahana ny fikarohana sy ny fampandrosoana tao amin’ny orinasa mikirakira resa-bola (cabinets comptables) maro tao Canada ihany koa tahaka ny KPMG, Raymond Chabot Grant Thornton. Efa ho 6 taona izao no lehiben’ny tetikasa mikasika ny fikarohana sy teknolojia ao amin’ny orinasa goavana antsoina hoe Diab Laleyan izy talohan’ny nanombohany ny fikarohana ahazoany ny doctorat-ny.
Manan-janaka kambana roa vavy i Sylvia ary na dia teo aza anefa ny fianarana sy asany dia tsy nataony ambanin-javatra ny fiainam-pianakaviany sy ny fikarakarany ireo zanany ireo.
Tsy mionona amin’ny fianarana fotsiny i Sylvia fa manandratra avo ihany koa ny firenena niaviany. Miara-miasa akaiky amin’ny Marovavy Productions New York ny tenany. Tsy olana ho azy velively ny mampiantrano ireo artista malagasy vonon-kandalo ao Canada. Efa nivahiny tao aminy ohatra ny tarika Ambondrona, Samoela, Mahaleo, Rija-Luk-Mahery…Entina hilazana fa tsy manadino ny tanindrazany velively izy na dia tsy monina any aza. Mirehareha amin’ny maha-malagasy azy i Sylvia ary azo adika fa fandraisan’anjara amin’ny fampandrosoana sy fanandratana ny tanindrazany izay hetsika izany.
Tsaratanàna: Nisy andian’olona saika hanafika ny borigadin’ny zandary
Nitrangana savorovoro indray tany Tsaratanàna, Faritra Betsiboka, ny alakamisy lasa teo. Tovolahy iray notanan’ny Zandary tao an-toerana no nangatahana andian’olona mba hanaovana fitsaram-bahoaka azy. Mazava ho azy fa tsy nanaiky izany ny lehiben’ny zandary ka saika notafihan’ireto andian’olona ireto ny birao nitanana ity tovolahy ity. Marihana fa resaka vonoan’olona no niandohan’ny raharaha. Tovovavy iray vao 16 taona monja no nisy namono tao Manakana, fokontany iray ao Tsaratanàna, tamin’ny alatsinainy teo. Tao anaty rano no hita ny fatin’ilay tovovavy ary rehefa natao ny fanadihadiana dia ity tovolahy voasambotra ity no avy hatrany dia noahiahiana ho tompon’antoka tamin’izany. Efa nitsoaka niala tao Tsaratanàna moa ny lehilahy saingy tsy lasa lavitra ihany dia voasambotra. Naverin’ny zandary tany Tsaratanàna ny voarohirohy mba ahafahana manao ny famotorana, tsy nanaiky anefa ny fianakavian’ilay tovovavy maty raha tsy hanaovana fitsaram-bahoaka ity tovolahy ity.